Osomabhizinisi abancane bacela uxhaso | News24
Osomabhizinisi abancane bacela uxhaso
PHOTO: precious gumede osomabizinisi
OSOMABHIZINISI abancane baseGamalakhe bahlanganyele emarobhotini angenela eGamalakhe bephethe bathi bacela uxhaso njengosomabhizinisi abasafufusa.
Laba besilisa noyedwa wesifazane bathi bavukele kulendawo njengoba bonke abantu abalibhekise eGamalakhe bengena la, lokho kusho ukuthi abathanda ukwazi kabanzi ngamabhizinisi abo bazoma babuze ukuze bakwazi ukuxhasa.
Umsunguli uSfundo Zuma uthe une-website enemininingwane yawo wonke amabhizinisi akulelilokishi laseGamalakhe.
Uthe uxhaso abulufunayo njengosomabhizinisi elokuthi nje abathengi bathenge kulamabhizinisi amancane asezindaweni esisemalokishini.
“Uma abathengi besixhasa nathi njengosomabhizinisi abancane nathi sizokwazi ukuthi sikhule sigcine sesakha amathuba emisebenzi,” kusho uZuma